9 Barxadaha Wax Barashada ee Ugu Fiican ee Codsiga Bilaashka ah
Halkan waxaa ah baraha internetka ee ugu fiican ee barashada internetka ee aad ka baran karto oo aad ka heli karto shahaadooyinka. Qaar ka mid ah barnaamijyadan barashada internetka waa bilaash, qaar waa la bixiyaa, qaarna waxay leeyihiin barnaamijyo bilaash ah iyo kuwo lacag leh.
Thanks to internetka iyo aaladaha IoT waxaad ku baran kartaa koorso, xirfado muhiim ah iyo farsamooyin khadka tooska ah leh kombiyuutar ama laptop, xiriir internet iyo oh haa, koob bun ah, galaas khamri ah iyo fadhiga lagu daro liiskaas .
Maqaalkani wuxuu tusi doonaa aagagga ugu wanaagsan ee wax lagu barto internetka si aad ugu bilowdo barashada koorso, aad u hesho shahaado, ku bartaan xirfad ama farsamo waxtar leh khadka tooska ah.
Sababtoo ah faafida COVID-19 ee socota, xiritaanka ayaa la bilaabay si looga hortago faafitaanka iyo infekshin dheeri ah ee xarumaha ganacsiga ee fayraska, iskuulada iyo meelaha kale ee bulshada ayaa la xiray laakiin wali waxaad heysataa kombiyuutarkaaga / laptopkaaga iyo qadka internetka oo waad awoodi kartaa waxbadan ku guuleysto kuwaan uun.
Kaqeybgalka fasalada waqtiyadaan ikhtiyaar uma ahan xirnaanshaha sidaas darteed waa inaad haysataa waqti dhan oo firaaqo ah gacmahaaga waana markan mid kufiican midkastoo la barto wax soo saar leh. Laakiin sidee wax u baran kartaa maadaama aadan aadi karin fasalka? Si fudud, waxaad haysataa kombiyuutar ama laptop iyo khadka internetka markaa waad fiicantahay inaad tagto.
Barashada khadka tooska ah waa casriyeynta waxbarashada caadiga ah ee aan naqaano maadaama ay ka faa'iideysi wanaagsan tahay qaabka caadiga ah ee wax lagu barto.
1 Faa'iidooyinka Barashada Internetka
2 Nidaamyada Wax Barashada ee Internetka (Nidaamyada Wax Barashada ee Ugu Fiican)
2.1 Madal Wax Barasho oo Online ah UDEMY
2.2 Madal-barashada TUTORROOM
2.3 Istaraatiijiyada barashada internetka
2.4 Madarasada Waxbarshada ee Online-ka ee COURSERA
2.5 KHAN ACADEMY Madal Wax Barasho oo Online ah
2.6 Madal barashada ALISON Online
2.7 edX Madal Wax Barasho oo Online ah
2.8 CODEACADEMY Madal Wax Barasho oo Online ah
2.9 Madal waxbarasho oo STANFORD ah
Faa'iidooyinka Barashada Internetka
Way ku habboon tahay maxaa yeelay waxaad ku baran kartaa xawaarahaaga, markaad jeceshahay, meel kasta oo aad joogto.
Way ka dhakhso badan tahay in la dhammaystiro. Haddii aad wax ku baraneyso khadka tooska ah si aad u hesho shahaado waxaa si dhakhso leh loo qaatay laakiin waxay kuxirantahay sida aad u daran tahay.
Waxaa loogu talagalay fasalka shaqeeya iyo kan aan shaqeynin. Waxaa laga yaabaa inaad shaqeyneyso oo aad go'aansato inaad sare u qaaddo aqoontaada ama xirfadahaaga si aad u hesho dallacsiin ama aad u bilowdo waddo shaqo cusub, barashada internetka ayaa ah habka ugu habboon ee aad ku dhaqaaqdo.
Waxaad ku raaxeysan kartaa bixinta da'da internetka.
Kahor intaadan bilaabin nooc kasta oo daraasad ah khadka tooska ah ama habka guud, machad ama goob waxbarasho oo waxbarashadu ka soo jeedo ayaa aad loogu baahan yahay. Waxaad ubaahantahay inaad dhigato iskuul gaar ah si aad ubarto waxa aad rabto laakiin marka hore, waxaad ubaahantahay inaad ogaato iskuuladan oo aad kabilaacdo meeshaas, tan waxaa sidoo kale lagu dabaqaa barashada internetka.
Barashada khadka tooska ah, waxaa jira barashooyin barasho oo gaar ah oo meesha, dabcan, aad kubaraneyso waxaad rabto, waxaana jira inbadan oo ka mid ah barnaamijyadan barashada tooska ah laakiin cilmi baaris qoto dheer kadib waxaan kuu sooqaatay barnaamijyada ugu wanaagsan ee 9 barashada tooska ah si aad xulashadaada u sameysid oo ay bilaabaan barashada.
(Meelaha ugu Fiican ee Wax Barashada tooska ah)
Madal Wax Barasho oo Online ah UDEMY
Udemy waa barxadda ugu weyn ee wax lagu barto internetka oo malaayiin isticmaale adeegsada adeegyadeeda ay ku bartaan koorso ama xirfad ay doortaan. Udemy waxay bixisaa koorsooyin kala duwan oo loogu talagalay ardayda si ay uga xushaan kuwa ay bixiyaan macallimiinta ugu fiican dhammaan dacallada adduunka.
Waa mid mudan in la ogaado in Udemy uu yahay barxad waxbarasho oo bilaash ah oo internetka ah inkasta oo ay hadda jiraan koorsooyin badan oo lacag lagu bixiyo oo ku yaal barxadda oo wata shahaadooyin dhammaystir ah.
Udemy waxay leedahay kumanaan kheyraad waxbarasho, koorsooyin iyo barnaamijyo ah waxayna aragtay kumanaan arday ah oo ka kala yimid adduunka oo idil oo ka faa'iideysanaya koorsooyinkooda.
Haddii aad raadineyso inaad sugto deeqaha waxbarasho ee dibadda, waxaa jira dhowr koorso oo laga heli karo barxadkan kaas oo ka caawiya ardayda caalamiga ah inay sugaan deeqo waxbarasho oo aad u badan oo ay dibadda wax ku bartaan Waxaad gujin kartaa halkan si aad uga qaybqaadato mid ka mid ah koorsooyinkan.
Qolka tababarka sidoo kale waa madal waxbarasho oo horseed u ah barnaamijyada bilaashka ah ee ardayda adduunka oo idil.
Mashruucan waxaa loo yaqaanaa fasal tayo sare leh oo tayo leh kaas oo leh astaamo u gaar ah sida fiidiyowga iyo farriinta maqalka ah, waxay u oggolaaneysaa gelinta faylasha PDF-ka iyo nidaamka maareynta barashada oo kaa caawin doona inaad jadwal u sameyso fasalladaada oo aad sameysato xisaab arday.
Tutorroom wuxuu taageeraa ururada waxbarashada si ay u dhisaan fasalo muuqaal ah oo khadka tooska ah ah, waxay bixiyaan koorsooyin onlayn ah ardayduna waxay ku bixiyaan lacagaha barnaamijyadooda khadka tooska ah.
Istaraatiijiyada barashada internetka
Software-ka loo isticmaalay horumarinta RCAMPUS madal waxbarasho online waa arrin gaar ah. Ardayda iyo macallimiintu waxay awoodaan inay qabtaan wadahadal fool-ka-fool ah, waxay u oggolaaneysaa macallimiinta inay si fudud ugu soo rogaan agabyada waxbarashada ardayda waxayna sidoo kale leedahay muuqaal loo yaqaan "Nidaamka Maareynta ePortfolio" oo loo isticmaali karo in lagu muujiyo xirfadaha ardayga iyo horumarka xirfadiisa.
Barxadku wuxuu sheeganayaa inuu yahay Nidaamka Maareynta Barashada 1aad oo leh Rubril-In lagu dhisay. Waxaa jira meesha ardayda wax ku barata kooxo ama fasallo dhammaantood ay la kulmi karaan naftooda si ay ula falgalaan.
Maaddaama mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee wax lagu barto internetka, RCampus aad ayuu uga jawaab celiyaa adeegsadaha adeegsadayaasha wanaagsan wuxuuna sii wadi karaa hay'adaha ku saabsan ardayda 1000 si ay ugu bixiyaan koorsooyinkooda khadka tooska ah iyada oo loo marayo dhammaan ardayda diiwaangashan iyo ka qaybqaadashada
Madarasada Waxbarshada ee Online-ka ee COURSERA
Kani waa barxad barasho oo caan ah oo khadka tooska ah lagala wadaago jaamacadaha iyo ururada adduunka oo dhan si ay u keenaan koorsooyin kala duwan, xirfado hal keyd xogta la raadin karo ah.
Coursera waa mid ka mid ah shirkadaha bixiya koorsooyinka tooska ah ee furan ee internetka (MOOCs) sidaa darteed waxay siiyaan macallimiinta ugu fiican ee ardayda baraya xirfadaha dalabyada iyo koorsooyinka bilaashka ah.
In kasta oo aad uga mid noqon karto barnaamijka 'Coursera' bilaash ahaan arday ahaan, inta badan koorsooyinkooda waa la bixiyaa. Kuwa bilaashka ah waxay sidoo kale u baahan karaan lacag gaar ah haddii aad rabto inaad hesho shahaado markaad dhammayso.
Coursera waxaa lagu tiriyaa inay tahay mid ka mid ah baraha internetka ee ugu fiican adduunka. Barxadku wuxuu iskaashi la sameeyay ilaa 200 + jaamacadood oo hormuud u ah iyo shirkadaha adduunka si loogu bixiyo barnaamijyo khadka tooska ah ugu sarreeya.
Shirkadaha sida Google, Illinois iyo iskuulada sida Jaamacadda Duke, Penn, Imperial College, Stanford iyo tiro jaamacado waaweyn ah oo adduunka ah waxay ku bixiyaan barnaamijyo iyo koorsooyin khadka tooska ah barnaamijkan. Marka ay timaado iskaashiga ugu sarreeya, fasalka iyo iskaashiga caadiga ah, Coursera ayaa ah tan ugu wanaagsan barta internetka ee adduunka laga barto.
Inta badan koorsooyinka ku saabsan our Liiska koorsooyinka internetka ee bilaashka ah ee Kanada waxaa lagu bixiyaa bartaan.
KHAN ACADEMY Madal Wax Barasho oo Online ah
Khan Academy wada-hawlgalayaal la leh dugsiyo badan oo dugsiga sare ah ka dib waxayna siisaa aqoon qoto dheer oo gaar ah ardayda barta maadooyinka kala duwan.
Barxaddu waxay leedahay istcimaalo adeegsade saaxiibtinimo ah taas oo macnaheedu yahay inay fududahay in la isticmaalo xitaa markii ugu horreysey waxaad awoodi kartaa inaad hesho jidkaaga wax walbana si wanaagsan ayaa loo abaabulay si aadan u jahwareerin.
Ku biirista barxaddan barashada internetka waa bilaash laakiin waxaa laga yaabaa inaad bixiso qaar ka mid ah koorsooyinka ay bixiyaan machadyada waxbarasho ee ku yaal barta
Madal barashada ALISON Online
Alison wuxuu ka mid yahay baraha internetka ee ugu wanaagsan ee laga barto internetka maadaama ay bixiso koorsooyin manhajka dugsiga waxaadna u baahan kartaa caddeyn dhammaystir ah.
Haddii arday ahaan aad rabto inaad ku barato koorso khadka tooska ah ee Teknolojiyada, Ganacsiga ama Caafimaadka Alison waxay mudan tahay in la baaro.
Waxaa jira dhowr koorso oo hal-mar ah oo khadka tooska ah ah oo aad kaqeyb qaadan karto sidoo kale waxaad sidoo kale kaheli kartaa shahaadada diblooma ee dhinacyada kaladuwan ee daraasadda.
Arday badan ayaa u wareejinaya xiisaha ay u leeyihiin inay ku helaan shahaadooyinkooda shahaadada khadka tooska ah. Waxaad ka hubin kartaa hagahayaga sida loogu helo shahaadada bachelorka khadka tooska ah ee internetka.
edX Madal Wax Barasho oo Online ah
Ma rabtaa khibrad waxbarasho oo bilaash ah oo khadka tooska ah ah? Barxadda edX wuxuu noqon karaa barxad ku habboon in la isticmaalo. Waxay bixisaa koorsooyin dhammaystiran oo khadka tooska ah ah oo ka kooban macallimiin, guddiyo dood, su'aalo, iwm.
Haddii aad diirada saareyso barashada koorso xisaabta, sayniska iyo injineernimada markaa edX ayaa noqon kara meesha kuugu fiican adiga markay ka soo uruuriso koorsooyinkan gaarka ah iskuulo kala duwan. Shahaadooyinka sidoo kale waa la heli karaa dhammaadka koorso kasta oo ku taal barxadda.
CODEACADEMY Madal Wax Barasho oo Online ah
Koodhadhka wuxuu leeyahay muuqaal aad awood ugu yeelan karto inaad lasocoto horumarkaaga isla markaana aad u abaabusho casharo qaabab dhameystiran.
Madal waxbarasho oo STANFORD ah
STANFORD-Online waa kordhinta khadka tooska ah ee Jaamacadda Stanford waxayna bixisaa dhammaan koorsooyinka ay jaamacaddu bixiso. Hadii aad raadinayso meel aad wanaag ka barato macalin, Madalkani waxa uu bixiyaa koorsooyin kala duwan oo kala duwan oo loogu talagalay ardayda ay bixiyaan macallimiinta ugu fiican Stanford.
In kasta oo Jaamacadda Stanford ay bixiso koorsooyin onlayn ah oo ku saabsan barnaamijka 'Coursera platform', haddana Stanford khadka tooska ah ayaa ah barxadda barashada tooska ah ee internetka oo kulmisa dhammaan koorsooyinka ay jaamacaddu ku bixiso internetka ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah iyo xitaa kuwa gudaha.
Ogaysiis: Dhammaan barnaamijyada halkan ku taxan waa bilaash in la dalbado. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad furto goobta oo aad iska qorto shuruudaha lagama maarmaanka ah.
Barnaamijyadan barashada tooska ah ee internetka ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwa ugufiican barnaamijyada barashada tooska ah ee internetka. Guud ahaan, waxaa jira kun iyo hal aalado kale oo barashada internetka ah oo halkaas ku yaal, qaarna waxaa aasaasay jaamacado sare sida Oxford iyo shirkadaha ugu sarreeya sida Google iyo xitaa barnaamijyada barashada bulshada sida LinkedInn.
Liiskan looguma talagalin in lagu ceebeeyo barnaamijyadan kale ee wax lagu barto ee sare laakiin kaliya in lagu iftiimiyo dhowrkan ka mid ah kuwa ugu caansan. Waxaa jira waxyaabo badan oo kale oo baraha internetka ah oo wanaagsan oo barashada ah kuwaas oo aan caan ka ahayn isticmaalayaasha yar.
Jaamacadaha ugu raqiisan Yurub ee ardayda
Jaamacadaha ugu jaban Australia
Koorsooyinka Khadka Tooska ah ee Ivy League
Shahaadooyinka Master-ka ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Shahaadooyinka wata
baraha internetka ee ugu fiicanNidaamyada Wax Barashada ee Ugu Fiican ee Codsiga Bilaashka ahmadal waxbarasho oo bilaash ahbarashada internetkabaraha internetkaboggaga internetka ee waxbarashadameelaha internetka lagu bartobaraha internetka ee ugu sareeyameesha wax looga barto internetka
Previous Post:15 Meelood Si Loogu Helo Imtixaan Ingiriisiga Ah Oo Jawaabo PDF ah
Post Next:Ilaha Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee ardaygu damacsan yahay inuu dibedda wax ku barto u baahan karo
Pingback: 27 Kooras Amniga Tooska ah oo Bilaashka ah oo wata Shahaadooyin - Adeegyada Waxbarasho onlaynka ah
tosin wuxuu leeyahay,
November 16, 2021 at 5: 20 pm
Halkan ma jiro koorso khadka tooska ah oo bilaash ah. Kaliya tiro badan oo qoraallo ah oo wakhtigaaga wax akhrinta luminaya.
Pingback: 5 Faa'iidooyin oo waaweyn oo ah Adeegsiga Fiidiyowga Waxbarashada 2021
Harun wuxuu leeyahay,
April 27, 2021 at 12: 29 pm
Waad ku mahadsantahay liiska